Mogozay Photos on Instagram
လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ....ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်ကြပါစို့ #mogozay #generalaungsan
🇲🇲ယနေ့ကျရောက်သော (၇၂)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ကို Mogozayမှ လှိုက်လှဲစွာဂုဏ်ပြုကြိုဆိုရင်း ပြည်ထောင်စုနေ့သမိုင်းအကျဉ်းကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်🇲🇲 🇲🇲ပြည်ထောင်စုနေ့ သမိုင်းအကျဉ်း🇲🇲 ********************************* တောင်တန်းနှင့် ပြည်မ ကွဲပြား ခွဲခြားမှုမရှိသည့် ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ထောင်ကြရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည့်အလျှောက် အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များထံမှ လွှတ်လပ်ရေး အတူတကွ ရယူကြရန် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပင်လုံ မြို့တွင် ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် (၁၉၄၇ ခုနှစ်) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ကို ပြည်ထောင်စုနေ့ဟု သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ #mogozay #uniondayofmyanmar
💍👒🕶👑Accessories ဆိုတာ👩မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပအတွက် မရှိမဖြစ်ပဲနော်🤩 Mogozay မှာရှိတဲ့ 🦋Accessories တွေထဲကမှ 😱၁သောင်းမကျော်တဲ့ ဈေးတွေနဲ့😍 မိန်းကလေးတို့အကြိုက် ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်း Accessories လေးတွေကို 🌻Collection လုပ်ပေးထားတာမို့ ပေးထားတဲ့✅ Link တွေကိုဝင်ကြည့်ပြီး Orderတင်လိုက်ပါနော် 👉Orderတင်နိုင်တဲ့ Link တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို အောက်မှာ 👇အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်🥰 💎Product Name : 18K Rose Gold Titanium Steel Bell Anklet Link : https://www.mogozay.com/product/index/20709 Price : Ks 7,400 💎Product Name :4sets of earrings Link : https://www.mogozay.com/product/index/20707 Price : Ks 5,400 💎Product Name : Retro knitted wool hair band Link : https://www.mogozay.com/product/index/20706 Price : Ks 7,000 – 9,800 💎Product Name : Fashion sunglasses Link : https://www.mogozay.com/product/index/20705 Price : Ks 7,900 – 9,500 💎Product Name : Simple joint ring combination Link : https://www.mogozay.com/product/index/20704 Price : Ks 3,100 – 3,700 "ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozayမှာဈေးဝယ်စို့" #Mogozay
💞အချစ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလလေးမှာ Mogozayရဲ့ချစ်ရတဲ့ Customers များ အတွက် 🥰အချစ်တွေနဲ့အတူ 💡Promo Code လေးတွေလာပါပြီ💞 💌၃သောင်းဖိုးနဲ့အထက်ဝယ်ရင် ၃,၀၀၀ကျပ်Discount ရမယ့် 💡Promo Code MOGOlove3000 💌၆သောင်းခွဲဖိုးနဲ့အထက်ဝယ်ရင် ၁၀,၀၀၀ကျပ် Discountရမယ့်💡 Promo Code MOGOlove10k 💌၁သိန်ဖိုးနဲ့အထက်ဝယ်ရင် ၂၀,၀၀၀ ကျပ် Discountရမယ့်💡 Promo Code MOGOlove20k 📆Promo Code တွေကို ၁၂.၂.၂၀၁၉ မှ ၂၈.၂.၂၀၁၉ ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်😘 ဘာပဲဝယ်ဝယ် ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆို Mogozay မှာပဲ အမြဲဝယ်ဖြစ်တဲ့ Mogozay ရဲ့ချစ်ရတဲ့ Customers 😘တို့အတွက် Mogozayက 🤩Monthly Promotion တွေ 😱Seasonal Promotionတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်ပေးနေတာမလို့ page ကို 👍see first လုပ်ထားပြီး Promotion တွေကိုအရယူလိုက်ပါ။🤗 “ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့” #Mogozay
❤️Valentine’s Day အတွက် အဆင်သင့်ရွေးပြီးသားလက်ဆောင်ဘူးမျိုးမပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက် 💝ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် 💖တကယ့်နာမည်ကြီး Branded Skin Care Set တွေနဲ့ Cosmetics တွေ ကို Mogozayက ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်နော်🎀 🎉 ဒါ့အပြင်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလဲရှိပါသေးတယ်🎉 အဲ့တာကတော့ ပေးထားတဲ့ ✅Link ထဲကပစ္စည်းတွေကို ⏰ ၉.၂.၂၀၁၉ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီအတွင်း ဝယ်ယူပါက 💡10% Discount ရမယ့်အခွင့်အရေးပါ 🙀Stockရှိသလောက်နဲ့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းမှာမလို့ 🤩လက်သွက်ဖို့တော့လိုမယ်နော် အဲ့တော့မြန်မြန်လေး Order တတ်လိုက်ပါ😱 ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် ✅ https://www.mogozay.com/product/index/20724 💁‍♀️10% Discount ရဖို့ 💡ဒီ" Promo Code MOGO14thFEBVDAY " 💡ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ 👔👠🎒ဘာပဲဝယ်ဝယ် ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆို Mogozay မှာပဲ အမြဲဝယ်ဖြစ်တဲ့ Mogozay ရဲ့ချစ်ရတဲ့ Customers 😘တို့အတွက် Mogozayက 🤩Monthly Promotion တွေ 😱Seasonal Promotionတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်ပေးနေတာမလို့ page ကို 👍see first လုပ်ထားပြီး Promotion တွေကိုအရယူလိုက်ပါ။🤗 “ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့” #Mogozay
🙏Mogozay ရဲ့ချစ်Customers တို့ရေ🙏 မကြာခင်ကျရောက်တော့မယ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ 🥰Valentine’s Day မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ 🤗သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် 💁🏼‍♂️ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ရော 💁‍♀️မိန်းကလေးတွေအတွက် ရော အသုံးဝင်စေမယ့် ကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေ ပါဝင်တဲ့ 🎁Valentine’s Gift Box of Love လေးကို 🌹Valentine’s Day Special အနေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်… ဒီ 🎁gift box လေးမှာ ပါဝင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေက နာမည်ကြီး 🙀Branded မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ Skincare ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှာဆိုတော့ အားလုံးအတွက် အသုံးလည်းဝင် အကြိုက်လည်းတွေ့ပြီပေါ့😻 ✅ https://www.mogozay.com/product/index/20719 ဒီလင့်ခ်ထဲမှာဝင်ကြည့်ပေးပါနော် ကဲ ဒီနှစ် 🎉Valentine’s Day မှာ ချစ်ခင်ရသူတွေကို Mogozay က 🎁Valentine’s Gift Box of Love လေးနဲ့ပဲ Surprise လုပ်လိုက်ရအောင်နော်🤩🥳 👔👠🎒ဘာပဲဝယ်ဝယ် ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆို Mogozay မှာပဲ အမြဲဝယ်ဖြစ်တဲ့ Mogozay ရဲ့ချစ်ရတဲ့ Customers 😘တို့အတွက် Mogozayက 🤩Monthly Promotion တွေ 😱Seasonal Promotionတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်ပေးနေတာမလို့ page ကို 👍see first လုပ်ထားပြီး Promotion တွေကိုအရယူလိုက်ပါ။🤗 “ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့” #Mogozay
နှစ်ကူးမှာလူကြီးမိဘတွေဆီကအန်ပေါင်းများများရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ 😇😇 အန်ပေါင်းဆိုတာကကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပြပေးတယ်လို့တရုတ်လူမျိုးတွေကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆိုအန်ပေါင်းများများရအောင်လူကြီးမိဘတွေကိုဘယ်လိုကပ်တောင်းကြမလဲအခုတည်းကစဉ်းစားထားတော့နော်။ 😎 💟အနီရောင်ဆိုတာတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှု 💰ပိုက်ဆံဆိုတာကံကောင်းခြင်းဆိုတော့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာပျော်ရွှင်မှုရော၊ကံကောင်းခြင်းတွေပါဆထပ်တပိုးတိုးပွားကြပါစေ #Mogozay
ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးရတနာလေးတွေကို အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပဲပေးချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပဲနော်… 💝 နုနယ်လွန်းတဲ့ ဘေဘီလေးတို့ရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဆိုတာ အရည်အသွေးစိတ်ချရပြီး အန္တ ရာယ်ကင်းဖို့က အဓိကပါ … 😊🎀😊 ဒီလို စိတ်ချရတဲ့ မွေးကင်းစကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို Mogozay မှာ စိတ်ကြိုက်ရွေးဝယ်နိုင်ပါပြီ။ 👶👶 *** နှစ်သစ်ကူးအထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဇန်န၀ါရီလတစ်လလုံး Mogozay ကနေ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် ဝယ်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီ Promo Code- JAN3000 ကိုသုံးပြီး (၃၀၀၀)ကျပ် Discount ရရှိမယ့် အစီအစဉ်လေးလည်း ရှိသေးတာဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ 🎀 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozayမှာ ဈေးဝယ်စို့! baby/kids toothpaste Ks 11,500 https://www.mogozay.com/product/index/19988 စီလီကုန်း ကလေးပန်းကန် Ks 15,000 https://www.mogozay.com/product/index/20341 Tula full standard baby carrier ( canvas ) Ks 258,500 https://www.mogozay.com/product/index/20292 mothercare ကလေးဘိုထိုင် Ks 22,000 - 45,000 https://www.mogozay.com/product/index/20306 gentle cleansing gel Ks 27,000 https://www.mogozay.com/product/index/19731 face cream Ks 15,250 https://www.mogozay.com/product/index/19736 #Mogozay
ကိုယ့်ရဲ့ Product တွေကို လူသန်းပေါင်းများစွာဆီ အချိန်တိုတိုအတွင်း ရောင်းချချင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ E-commerce တစ်ခုပေါ်လာပါပြီ 🥳 သင့်ရဲ့စီးပွားရေးပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့Mogozay ကဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်လဲလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ 🤗💰 ထူးခြားချက်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ✅ • ကိုယ့်ရဲ့ Product တွေကို ဈေးဝယ်သူသန်းပေါင်းများစွာဆီ ပြသပေးခြင်း • ပစ္စည်းရောင်းရမှသာ ကော်မရှင်ပေးရပြီး ကြော်ငြာခ(လုံးဝ)ပေးစရာမလိုခြင်း • လျင်မြန်စိတ်ချရတဲ့ ပို့ဆောင်မှုစနစ် • လုံခြုံတဲ့ ငွေပေးချေမှုစနစ် • ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ • လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ ပစ္စည်းလက်ခံရာနေရာရှိခြင်း အပြင် အခြားသော သင့်အတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ့် Mogozay နဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ အခုပြထားတဲ့ Link မှာ တစ်ခါတည်း စာရင်းပေးသွင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ⤵️ https://www.mogozay.com/pages/sell_on_mogozay #Mogozay
ချစ်သူများနေ့မတိုင်ခင် ချစ်ရတဲ့သူလေးကို ဖွင့်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်…😎🤩 မိန်းကလေးတိုင်း မငြင်းရက်နိုင်အောင်ချစ်ကြတဲ့ ဒီလိုချစ်စရာအရုပ်လေးတွေနဲ့ ဖွင့်ပြောသင့်တာပေါ့နော် 🤗😍 ဘယ်လိုလဲ… ချစ်ရတဲ့သူလေးကြိုက်တတ်တဲ့ အရုပ်လေးကို Mogozay ကနေမှာပြီး Surprise လုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ Valentine’s Day မှာ ပျော်ရပြီလေ 🎀💘 ခုနေကြိုဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။ နီးမှဆို ဈေးတွေတက် ပစ္စည်းတွေပြတ်တတ်လို့ ချက်ချင်း မှာလိုက်တော့နော် 😘 * နှစ်သစ်ကူးအထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဇန်န၀ါရီလတစ်လလုံး Mogozay ကနေ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် ဝယ်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီ Promo Code- JAN3000 ကိုသုံးပြီး (၃၀၀၀)ကျပ် Discount ရရှိမယ့် အစီအစဉ်လေးလည်း ရှိသေးတယ်နော် ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozayမှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay
2019 ခုနှစ်ရဲ့ Valentine’s Day အတွက် Romantic ဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ကြိုကြိုတင်တင် မှာထားလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဆို ချစ်သူလေးက ကိုယ့်ကို အများကြီး ကိုချစ်သွားမှာ အမှန်ပဲနော်။ 💖💖💖 ချစ်သူတိုင်းအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကို www.mogozay.com မှာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူရင်း ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေ အကြိုဖန်တီးလိုက်တော့နော် 💋💋 ခုနေကြိုဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။ နီးမှဆို ဈေးတွေတက် ပစ္စည်းတွေပြတ်တတ်လို့ ကြိုက်တာလေးတွေ့ရင် ချက်ချင်း မှာလိုက်တော့နော် 💝💘 *** နှစ်သစ်ကူးအထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဇန်န၀ါရီလတစ်လလုံး Mogozay ကနေ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် ဝယ်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီ Promo Code- JAN3000 ကိုသုံးပြီး (၃၀၀၀)ကျပ် Discount ရရှိမယ့် အစီအစဉ်လေးလည်း ရှိသေးတာဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ 🎀 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozayမှာ ဈေးဝယ်စို့! Valentines Gift Ks 16,300 - 32,300 https://www.mogozay.com/product/index/20189 Preserved Flower Glass Bottle Ks 7,400 - 12,200 https://www.mogozay.com/product/index/20192 Flower Gift Box Ks 15,300 - 18,600 https://www.mogozay.com/product/index/20190 Gift Box Ks 13,100 https://www.mogozay.com/product/index/19378 Gift Box Ks 6,900 - 9,900 https://www.mogozay.com/product/index/20213 #Mogozay #valentineday #collection
မိန်းကလေးတိုင်း စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ Pantone Color က ဒီနှစ်မှာဆိုရင် Living Coral လို့ ခေါ်တဲ့ သန္တာရောင် ၊ လိမ္မော်ဖောက်ထားတဲ့အရောင်လေးပါတဲ့နော် 😘😘😘 နွေးထွေးမှု ၊ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့အရောင်လေးဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ တုန်းကတော့ Ultra Violet အရောင်လေးက Pantone Color လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 😉 ချစ် Customer လေးတို့ရော ၂၀၁၉ မှာခေတ်စားမယ့် သန္တာရောင်လေးနဲ့ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်လေးတွေ စုထားပြီးပြီလား 🎀🎀🎀 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay
ခေတ်မီတယ်…ဖော်ရွေတယ်…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ် 💋 ဒီလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ခရီးသွားတိုင်းအမြဲသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ၊ ဘယ်သွားသွားမပါမဖြစ် products လေးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ...😍 သိချင်နေမှန်းသိလို့ Mogozay က ချစ် Customer လေးတို့အတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းလေး (၅) မျိုးကို ရွေးပေးထားလိုက်ပြီနော် 💖😘 မိန်းကလေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေအတွက်ဆို ပစ္စည်းလည်းစုံ၊ အရည်အသွေးလည်းစိတ်ချရတဲ့ www.mogozay.com မှာပဲ ရွေးဝယ်လိုက်တော့မယ်နော် 🎀🎀🎀 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့!! #Mogozay Female Embroidery Casual Wallet Ks 7,300 - 8,700 https://www.mogozay.com/product/index/19071 Travel Accessories Bag Ks 6,100 - 7,400 https://www.mogozay.com/product/index/19563 Underwear Storage Box Ks 8,800 https://www.mogozay.com/product/index/19998 Transparent Travel Beach Bag Ks 6,400 - 8,700 https://www.mogozay.com/product/index/19565 Cute Cartoon Sleep Eye Mask Ks 3,400 https://www.mogozay.com/product/index/19847
ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါလေး ဖြစ်ပါစေ🤩🤩 နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေနဲ့တူတူ နှုတ်ဆက်ရင်း ၂၀၁၉ နှစ်သစ်ကို ပျော်ရွှင်စွာကြိုဆိုလိုက်ရအောင်နော် 🌠🌠🌠 #Mogozay
အားလုံးပဲ Merry Christmas ပါနော် 🤗🎁 ပျော်ရွှင်စရာခရစ္စမတ်အချိန်အခါလေးမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစုသူငယ်ချင်းများနဲ့ သာယာအေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း Mogozay မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ 🌲🍁⛄️ #Mogozay #MerryChristmas
Mogozay ရဲ့ချစ်ရတဲ့ Customer တို့ www.mogozay.com မှာအလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်ရအောင် ဝယ်ယူပုံအဆင့်ဆင့်လေးကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော် 💖💖 ကဲ ပြထားပေးတဲ့ အဆင့်အတိုင်း Mogozay မှာ Account လည်းလုပ်ပြီးပြီ…ဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်း ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ အခုပဲ Mogozay မှာဝယ်လိုက်တော့နော်….. 🛍🎀🎀 🤩ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံး🤩 ကျပ်(၅သောင်း)ဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူသူတိုင်း ဒီ☃️❄️Promo Code- MGMPC18❄️☃️က အသုံးပြုပြီး✅10% OFF Discount ကိုရယူဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်♥️ ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay
Dec 25မှာကျရာက်မယ့် Merry Christmasနေ့လေးအမှီ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခရစ္စမတ်အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေကို Mogozay မှာ 20 % OFF နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရမှာ ဒီနေ့နောက်ဆုံးနော်။ 💝💝 Promotion💗 လေးတွေရယူဖို့➡️ https://www.mogozay.com/home/ #xmas_collection မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေပြီး 🛍🛍၀ယ်လိုက်ရအောင် ကဲ.. ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay #ChristmasCollection
💥Mogozay December အထူး Promotion လာပြီနော် 💥 🛍ဘာပဲဝယ်ဝယ် ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆို Mogozay မှာပဲ အမြဲဝယ်ဖြစ်တဲ့ 💙Mogozay ရဲ့ချစ်ရတဲ့ Customers တို့အတွက် 💙 ဒီဇင်ဘာလ တစ်လလုံး Mogozay မှာ 🛍 ကျပ်၅သောင်းဖိုး နှင့်အထက် ဝယ်ယူသူတိုင်းကို 🎀 10 % Discount ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။ ✅ ဈေးနှုန်းလည်းမှန်…ပစ္စည်းလည်းစုံလင်တဲ့ Mogozay မှာ 10 % Discount တွေ ရယူဖို့ www.mogozay.com မှာ Sign-up လုပ်ပြီး အမြန်ဆုံးဈေးဝယ်လိုက်ရအောင် 💖🛒 ☃️ကျပ်၅သောင်းဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူသူတိုင်း 10% Discount ကို ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံး ပေးထားတာမလို့ ၅သောင်းဖိုးပြည့်အောင်ဝယ်ပြီး ဒီ " Promo Code- MGMPC18 " ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။☃️ ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay #December #hotpromotion
ချစ် Customers လေးတွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း Mogozay က Black Friday Sale ကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးလိုက်ပါပြီနော် 💖 Black Friday Sale မှာမဝယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ချစ် Customer တို့လည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းတွေကို 😍😍 ဒီ Promo Code – EX300FFBLACKFRIDAY သုံးပြီး 30% OFF ရယူလိုက်ပါ Extended Black Friday Sale ကာလက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိပဲနော် 🎀🎀 ရင်ခုန်စရာတွေပိုတိုးစေမယ့် Mogozay ရဲ့ Extended Black Friday Sale ကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးလိုက်ပါပြီနော် ယုံကြည်စိတ်ချ လိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့ #Mogozay #Blackfridaysale
Mogozay ရဲ့ 📣Black Friday Special Activity📣တခုအနေနဲ့ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ဒီည 🖤 The VIBE Black Friday Party 🖤သွားမယ့် 💁🏻‍♀️သူအားလုံးအတွက် Mogozay.com မှာ shopping လုပ်နိုင်မယ့် 💞30% OFF 💞Gift Vouchers တွေမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးသွားမယ့် အကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော်😉 #TheVIBE #BlackFriday #Party #Mogozay
♥️ချစ် Customers♥️ တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ 📣Mogozay Black Friday Sale အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးစပါပြီ 📣 အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ၊ အ၀တ်အထည်နဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်တွေကို 😱Up to 80 % 😱အထိလျော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချပေးနေတာမလို့ လက်နှေးနေလို့ မဖြစ်ဘူးနော် 💗 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay #Blackfridaysale
ချစ် Customers တွေအတွက် 😍 နောက်ထပ် Black Friday Sale အကြိုအနေနဲ့ Mogozay မှ ပစ္စည်းများစွာကို . . . 🤩 မနက်ဖြန် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်း 50% OFF ဖြင့် ဈေးလျော့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ 💝💝 50% OFF မှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေပါမလဲဆိုတာကို မနက်ဖြန်မှာ စောင့်ကြည့်ပြီးဝယ်ယူဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော် ☺️☺️ အချိန်အကန့်အသတ်ကတော့ နိုဝင်ဘာ (၂၁) ရက်နေ့ (၂၄) နာရီအတွင်းမှာပဲ ဝယ်ယူရမှာပါ 🎊 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay #Blackfridaysale
😍ချစ် Customers လေးတို့ရေ 😍 Black Friday နေ့ အထိစောင့်စရာမလိုတော့တဲ့ Mogozay ရဲ့ 💁🏻‍♀️Product အားလုံးကို 30% OFF 💓နဲ့ရောင်းချပေးမယ့် Pre Black Friday Sale လာပါပြီ 🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀 Promo code - 30OFFBLACKFRIDAY လေးကိုထည့်သွင်းပြီး 30% အထိလျော့ဈေးတွေကိုရယူလိုက်ပါ😉😘 🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀~🎀 နိုဝင်ဘာ (၁၉) ကနေ နိုဝင်ဘာ (၂၁) ရက်အထိပဲ အကြိုရောင်းပေးမှာဆိုတော့ လက်နှေးနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးနော်😉😘 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay #Blackfridaysale
လုပ်ငန်းသုံး အိမ်သုံးပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ ကလေးအသုံးအဆောင် ၊ အ၀တ်အထည်နဲ့ ဖက်ရှင်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းများစွာကို Up to 80 % အထိလျော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချမယ့် Mogozay Black Friday Sale အွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲကြီးမှာ Shopaholic လေးတွေရော ဘာတွေဝယ်ကြမလဲ စဉ်းစားပြီးပြီးလား😊🤩 နိုဝင်ဘာ (၂၃) ရက်နေ့တစ်ရက်တည်းပဲ ဝယ်ယူလို့ရတာမလို့ လက်နှေးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်😇 ယုံကြည်စိတ်ချလိုတာရစေဖို့ Mogozay မှာဈေးဝယ်စို့! #Mogozay #Blackfridaysale
Heading back to reunite with this amazing team. Stronger together. Continuing to write an amazing story. #mogozay #mogolife #yangon #myanmar #instamyanmar #entrepreneur #startup #mediaconsultant #consultant #team #teamspirit
With the president of Singapore Association of Myanmar (SAM) Mr. Sims Teo! Thank you for gracing ya with your presence! #mogozaylaunchparty #mogozay #mogozaylaunch #yangon #myanmar at Yangon
Extremely talented media talents with me from Mediacorp! From Jurassic to New age! Lol extremely wonderful company. Flew down foranight just for the launch,amillion thanks! #mogozay #mogozaylaunchparty #mogozaylaunch #mediacorpalumni #medialife #mediaconsultant #celeb at Yangon
Absolutely honoured to have you with me at the launch, thank you for being there! this handsome bro Ye Lay isavery famous singer celebrity in Myanmar! He told me he has no gf, either that’sablatant lie or you ladies are just not trying hard enough. #mogozay #mogozaylaunchparty #mogozaylaunch #myanmarcelebrity #myanmaractor #celebrity #myanmarsinger #yelay #yangon #myanmar #ootdmyanmar at Yangon
Milestones! @sithuphyo Let’s make some history! #mogozay #mogozaylaunchparty #friendshipgoals #yangon #myanmar at Yangon